Lova tsara lavitra
"Ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo". 1 Pet.1:4
Tsy tokony ho avy amin’ny fo heniky ny faniriana feno fitiavan-tena ny hataka ataontsika amin’Andriamanitra. Mampirisika antsika Izy hifidy ireo fanomezana manandratra ny voninahiny. Iriny ny hifidianantsika ny haren’ny lanitra fa tsy ny haren’ny tany. Velariny manoloana antsika ny tombontsoa sy ny mety hahazoana mifandray amin’ny lanitra. Mampirisika antsika eo amin’ny tanjona ambony indrindra kendrentsika Izy ary miaro ny haren-tsarobidy indrindra ananantsika. Rehefa lasa tsy hita intsony ny harena sy fananana eto amin’izao tontolo izao, dia hifaly amin’ny hareny ao an-danitra ny mpino, dia harena tsy ho levon’ny loza mitranga ety an-tany. - RH, 10 Aogôsitra 1898.
Mampalahelo tokoa ny mahita fa tsy miraika amin’ilay lova tsy mety lo ny olona fa miaina ao anatin’ny fireharehana sy ny fitiavan-tena ary ny fisehosehoana. Amin’ny fetezany hofehezin’i Satana no tsy hahazoany intsony ny fitahiana izay mety ho azy eto amin’izao fiainana izao sy any amin’ny fiainan-koavy. Afaka ny hiditra ao an-dapan’ny lanitra izy ka hifandray amin’i Kristy sy ny anjelin’ny lanitra ary ireo andrianan’Andriamanitra ka hanam-pahafahana sy fitoviana amin’izy ireo. Toa tsy mampino anefa ny fahitana azy fa miala tsy ho amin’ny lanitra akory ny sainy (...)
Miady mafy mba hahazoana ny fanahin’ny olona i Satana (...) Tsy tiany ny hanopazan’izy ireo maso akory any amin’ilay voninahitra hoavy, dia ny voninahitra maharitra mandrakizay nomanina ho an’ireo izay honina any an-danitra. Tsy tiany ihany koa ny hananan’izy ireo fanandramana izay mampiaina azy sahady ny fahasambaran’ny lanitra (...)
Ireo izay manaiky an’i Kristy ho Mpamonjiny dia manana ny teny fikasan’ny fiainana amin’izao fptoana izao sy ny an’ny fiainan-koavy (...) Afaka ny ho tonga mponin’ny lanitra ny mpianatr’i Kristy madinika indrindra, ka ho mpandovan’Andriamanitra amin’ny lova tsy mety simba sy tsy mety levona. Enga anie ka hisafidy ny fanomezan’ny lanitra ny tsirairay avy ka ho tonga mpandovan’Andriamanitra amin’izany lova izany, ho voaaro amin’ny mpandrava rehetra ny zony maha-tompony azy, eny, tontolo tsy misy fetra izany! Aza misafidy an’izao tontolo izao! - FCE, tt. 234,235.